Ubax iyo saladh karooto leh tufaax | Cunnooyinka jikada
Maria vazquez | 12/06/2021 10:00 | Ensaladas, Bilowga Qabow
Ku caajisay salad dhaqameed ruush ah? Guriga waan jecel nahay, laakiin sidoo kale waxaan abuurnaa noocyo kale oo sidan ah Ubax iyo saladh karooto leh tufaax. Waxaan diyaarinay usbuucii la soo dhaafay aadna waan u jeclaanay maantana waan idinla wadaagayaa. Miyaad ku dhiirrataa inaad isku daydo?
Saladkan Ruushka waa mid fudud oo nasteexo leh. Cauliflower waa maaddada ugu weyn ee ka mid ah, inkasta oo ay waliba leedahay basal, karooto, tufaax iyo Digaagga qaar! Hadaad si sax ah wax u aqriso, chickpeas. Kuwani, marka lagu daro bixinta isku-dheelitirka saladhka, waxay ka dhigaan wax aad u dhameystiran.
Saladku waa lagu kari karaa saliid iyo khal, hase yeeshee waxaan doorbiday inaan ku daro majones markan. Tani waxay ka dhigeysaa mid ku habboon diyaari ismaris iyo ismaris, laakiin sidoo kale wehel u ah hilib kasta ama saxan kalluun. Kuma qaadan doonto wax ka badan 15 daqiiqo inaad ku diyaariso, waa laguu ballanqaaday!
Beedkan iyo saladhka karootada leh tufaaxa ayaa ku habboon sidii buuxinta sandwich, laakiin sidoo kale wehel u ah wixii hilib ama kalluun ah.
Nooca cuntada: Ensaladas
Waqtiga karinta: 6 m
Wadarta waqtiga: 21 m
Ul ubaxa weyn
1 dheriga yar ee digaagga la kariyey (200g.)
3 dabacasaha dabacasaha
1 scallion, la jarjarey
2-3 qaado majones
Digsi biyo badan ku jira waxaan ku karineynaa ubaxa ubaxa 6 daqiiqo ama ilaa jilicsan.
Halka, waxaan dhaqnaa digaaga durdurka biyaha qabow.
Marka la maydho, waxaan dhigeynaa baaquli iyo waxaan ku jarjaray fargeeto. Uma baahnid inaan nadiifinno iyaga, waa inay jajab noqdaan oo xitaa waxaa jiri kara digaag dhan.
Kadib ku dar karootada shiidan iyo basasha, mid ka mid ah tufaaxa iyo ubax la jarjaray.
Xilliga iyo isku dar si fiican dhammaan walxaha.
Kadib waxaan ku darnaa majones oo markale ayaan isku qasannaa.
Waxaan u adeegnaa ubaxa iyo karootada salad lagu qurxiyay tufaaxa labaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Ensaladas » Ubax iyo saladh karooto leh tufaax
Cauliflower iyo kareemka curry